Yakachena Kudya Kwemakamuri mazano Art sens - mazano eimba nebindu
10.09.2012 Yakatumirwa na: Art Sense
Pfungwa Pamba, Imba yekudyira
Chinja imba yekudyira ive yakatsva uye yezuva kona yakazadzwa nechiedza uye mumhepo. Iyi ndeimwe yenzvimbo dzakakosha kwazvo mumba dzinounza mhuri yese pamwechete kwete kuti mudye chete asiwo kutaura, kugovana mazano uye zvinoratidzwa, kukurukura zviitiko. Izvo zvakakosha kuti iwe unoshongedza sei imba yekudyira uye iyo mamiriro ayo ayo aichatsamwisa. Mavara akareruka, rattan, bamboo uye wicker fenicha, inounza kureruka uye pfungwa yenzvimbo, yakajeka mavara uye fenicha yakagadzirwa nepurasitiki uye girazi, kukonzera kunakidza uye kubata, nepo kusiyanisa mavara nehukuru hukuru hwematanda fenicha fenicha, simbisa mitsetse uye upe pfungwa yeyakajeka , kugadzikana uye kuwirirana. Sarudza yako yaunofarira musanganiswa uye gadzira iyo chaiyo mamiriro emhuri.
bamboo, zvemukati dhizaini, kushongedzwa kwemba, kushongedza zvemukati, kushongedza imba yekudyira, design, fenicha yemapuranga, muti, mazano epamba, mazano emukati, imba yekudyira mazano, zvemukati, zvemukati dhizaini, fenicha, fenicha, wicker, rattan, mazano matsva, mavara matsva, girazi, imba yekudyira, mavara, kupenya, mavara akajeka, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Bindu nzira uye madhisheni
Alleyways uye nzira zvakagadzirirwa kwete chete nekuda kwekushongedza, asiwo kudzivirira ...
Kabha kadiki kubva pamavhiri maviri ekare
Kugadzira imba yekutandarira kubva kumavhiri emota emota ipfungwa yatakatobata ...
Bindu pallet bar
Kugadzira bhera pallet bar zviri nyore, zvakachipa uye zvinoshanda. Mupfungwa iyi ...
Imba yekutandarira mazano pakati pe15 uye 20 sq.m. - brown yemukati dhizaini
Nemazano aripo ekushongedzwa kwemukati meimba yekutandarira pakati pe15 uye 20 sq.m, yakanzwisisika ...
Kugara Kwepfungwa mazano - Mazuva Ano Kugadzira MuBrown
Nenzvimbo yekugara yekutandarira mifungo yakatarisana nezvimwe zvigadzirwa zvemazuva ano mubrown, isu tichapa imwe ...
Nemazano aripo emachira nemachira uye kubatanidzwa kwavo mumifungo yekugadzirwa kwemukati ...